Baboleka ngisho eyokuthenga ukudla abakuleli | isiZulu
Baboleka ngisho eyokuthenga ukudla abakuleli
Abuleli bacwile ezikweletini
Usakweleta eyomshado uZizi Kodwa
Zisixakile izikweletu - Umbono
Johannesburg - Abantu baseNingizimu Afrika bahlale beboleka imali, ngisho eyokuthenga ukudla nokugibela, kusho umbiko owethulwe emhlanganweni ebekudingidwa kuwo ngezimali nezikweletu zabantu bakuleli.
"Akusikho nje ukuthi baboleka imali yokuthenga izimoto noma imizi, abantu baboleka imali yokuthenga ukudla abazokudla. Yingakho nje kunokwenyukwa kwezibalo zabantu abanezikweletu, bazama ukuphila," kusho inhloko yoMnyango wezezimali e-University of South Africa, uBernadene de Clercq.
"Kunyuke amanani kaphethiloli nogesi. Izidingo zabantu ziningi ekubeni ingekho imali ebangenelayo," echaza.
UDe Clercq utshele abantu abahambele umhlangano eMidrand wathi abathengi baseNingizimu Afrika baboleka izimali ngoba benzela ukubeka ukudla etafuleni.
Uthe ngesikhathi abantu benza izikweletu eminyakeni emibili edlule, babengazi ukuthi isimo sizoshuba kubize ugesi nophethiloli, uthi njengamanje sekungumqansa ukukhokha zonke izikweletu, abanye bahlulwa ngisho wukukhokhela abantwana esikoleni.
"Kumele kufundiswe abantu ngokunakekela izimali zabo," kusho uDe Clercq.